Rayson | ergoopedic na-eme ergopedic
Site na ihe ohuru ohuru na teknụzụ na ụzụ na teknụzụ na-eme ka ọ pụta ìhè ma na-arapara na mmepe nke teknụzụ. Ergopedic Play, marged na-emepụta mmiri na-emepụta ihe zuru oke ma na-eweta ngwaahịa dị elu na ọrụ otu nkwụsị. Anyị ga-eme ya, dịka oge niile, na-arụ ọrụ ngwa ngwa. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara akwa akwa nke mmiri na ngwaahịa ndị ọzọ, na-eme ka anyị mara. Ọ bụghị naanị na ọ ga-enye ndị mmadụ ihe ime mmụọ na ịchụso mma nke ịma mma.